Arday kor u dhaafeysa 10 oo dhaawac kasoo gaaray dugsigi ay dhiganayeen oo u xalay dab ka kacay – The Voice of Northeastern Kenya
Arday kor u dhaafeysa 10 oo dhaawac kasoo gaaray dugsigi ay dhiganayeen oo u xalay dab ka kacay
Iyadoo wali wararka ku sabsan dugsiyada oo dabka kacaya la soo tabinayo islamarkaana kamid ah waxyaabaha sida aad ah looga hadal hayo dalka, ayaa waxa lagu soo waramaya in dab u ka kacay schoolka Langata ee kuyaala Magaalada tan Nairobi.
Dabkan oo kacay 7pm fidnimo ee xalay ayaa lagu soo waramaya in u 11 arday oo dhiganeysay dugsigaasi uu u gestay dhaawacyo fudud.
11-kaas arday ee uu dhaawac soo gaaray ayaa lagu soo waramaya in xilligi ay musiibadaasi la kulamayeen ay isku dayayeen sidii hantidooda ay oga soo baxsan lahaayen qeybaha jiifka ee ay seexanayeen.
Taliyaha Ciidamada Booliska ee Magaalada tan Nairobi Joseph Koome oo xaqiijiyay dhacdadaasi ayaa sheegay in ardaydii dhaawacantay ay qaar kamid ah naafta ku dhagtay kadib markii uu saameeyay qiiqa halkaasi ka baxayay waxana hadda dhamaantood laga saaray Isbitaalka kadib markii la dabiibay.
Gawaarida gurmadka deg deg ah ee dab damiska oo ay leeyihiin dowlada Countiga Nairobi ayaa islamarkiiba soo gaaray dugsiga uu dabka ka kacay waxana juhdi ay u galeen sidii ay kudami lahaayen kuwaas oo markii dambe ku guulestay in ay xakameeyan.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo wali dowlada ay ku jah wareersan tahay meel ay wax ka bilawdo si loo yareeyo talaaboyinka ay ardayda ku gubaayan dugsiyadooda oo hadda noqotay mid maalin walbo dhagaha loo taago dugsiga xigo ee guban doono.
Mas’uuliyiinta waxbarashada ayaa ku kala aragti duban sidii looga hortagi lahaa falalkan ay ku baaba’ayaan hanti dowladeed iyo kuwa ardaydaba.
Qaxooti Suuriyaan ah oo baangad ku dilay Haweeney gudaha Jarmalka →